Ithegi: uyilo lwentsebenziswano | Martech Zone
Ithegi: uyilo lwentsebenziswano
NgoLwesibini, Februwari 11, 2020 NgoMvulo, Februwari 10, 2020 UHeidi Melin
Abathengisi kunye nobuchule bokufumana ubuchule obuncinci xa incoko yenkqubo isiza. Oku akufanele kusimangalise. Emva kwayo yonke loo nto, sibaqeshela amandla abo okuba yeyantlandlolo, yokucinga nokungaqhelekanga. Sifuna ukuba bacinge ngokukhululekileyo, basisuse kwindlela ebetyiweyo, kwaye bakhe uphawu olutsha olubonakalayo kwindawo yentengiso enabantu abaninzi. Asinakho emva koko ukujika silindele ukuba izinto zethu zoyilo zenziwe kakuhle, zilungelelaniswe nenkqubo yabalandeli
Kutshanje, ndifumene i-imeyile enekhonkco phezulu eyathi abantu bayila i-imeyile entsha kwaye bafuna impendulo yethu. Ndicofe kwikhonkco kwaye yayiyimbonakalo efikeleleka esidlangalaleni yoyilo olutsha lwe-imeyile yinkampani. Njengoko bendikroba iphepha, bekukho iindawo ezinendawo eneendawo (izangqa ezibomvu) ezinokucofa kwaye ingxelo ethe ngqo yanikezelwa ngabantu abatyelele iphepha. Ndacofa
I-BugHerd: Khomba, cofa usebenze kwiWebhu
NgoLwesibini, Juni 4, 2013 NgoMvulo, Juni 3, 2013 Douglas Karr
Nantsi into ebalulekileyo kuwe… ungathini ukuba ungadibanisa inkqubo yolawulo lweprojekthi kunye nezichazi esikrinini ukwenza kube lula ukunika ingxelo ngemicimbi kunye nokwenza imisebenzi kwiwebhu? Akukho zabelwana zesikrini, ezibuza malunga neenguqulelo zebrawuza, okanye ukuzama ukucacisa imiba echazwe ngumntu ongengobuchwephesha. Ungathini xa unokuvula nje i-app yesikhangeli, khomba, ucofe kwaye uxele umba kwindawo yakho ngqo kwiqela lakho lewebhu okanye